တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက် Self-ကျေနပ်မှု၏ဆောင်ပုဒ်သည်ဧကန်အမှန်တစ် ပူးပေါင်း. လိင်၏အများဆုံးထိခိုက်မခံတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဖက်သို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအပေါ်မိတ်ဖက် cheat အတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလား?
လူအများစုအဘို့, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဦးတည်းရဲ့လိင်တစ်ဦးမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘော, သို့သော်အချို့ကိစ္စများတွင်သာယာဝပြောရေး၏နက်ရှိုင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်, ထိုပုံဖိအားရုံလွတ်မြောက်မှုကို၏တူးဖော်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်မသာ။
ဒါဟာပြီးနောက်အားလုံးသိပ္ပံနည်းကျအနေနဲ့အော်ဂဇင်, စိတ်ဖိစီးမှုကြိမ်အတွင်းအထူးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုအပေါ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့လျှော့ပေါ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုသက်သေပြနေသည်။ ယခုဆိုဆက်ဆံရေးအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာပဲများသောအားဖြင့်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားကိုရှာဖွေရှည်လျားသောကာလတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကျော်ရှိရာတွင်အသုံးပြုသည်။
နေ့စဉ်အသက်တာ၏စတင်သည်နှင့်လိင်၏ကြိမ်နှုန်းလျော့နည်းစေ, တကမိတ်ဖက်နောက်တဖန် Self-ဆန္ဒပြည့်၏နည်းလမ်းများ access လုပ်ပါတယ်ကြောင့်အတော်လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီများအတွက်အကြောင်းပြချက်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားကြသည်။ တဦးတည်းအခြမ်းတွင်ပင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအပျြောအပါးတည်ရှိဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကဝတ်ဆင်တဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ပြဿနာအဆင့်, သာမန်ဖြစ်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာလူများစွာလိင်နှင့်အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုပိုင်။ မေးခွန်းတစ်ခုမိတ်ဖက်အဖြစ်ဤအမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
ဤပြဿနာနှင့်အတူတစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်ပြဿနာဒါမကြာခဏအကြောင်းကိုစကားပြောမပြုလုပ်, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်စိတ်ဖိစီးမှုဖယ်ရှားပစ်ရမယ့်ဿုံတရားဝင်လမ်းအဖြစ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြည့်ရှုစေခြင်းငှါနေစဉ်, ကပူးပေါင်းအခြားဘက်များအတွက်ဆက်ဆံရေးတစ်ဦးသစ္စာဖောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကဘုံလိင်ဒါမှမဟုတ်ပူးတွဲဆက်ဆံရေးအတွက်အကျိုးစီးပွား incipient မရှိခြင်း၏ရိုးရှင်းစွာတစ်လက္ခဏာမှကိစ်စတှငျစျြလြူရှုမှုအပေါ်ဖြစ်အယူခံဝင်တစ်ဦးမရှိခြင်းညွှန်ပြနိုင်ဘူး။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, မဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆန္ဒပြည့်အဘို့ရေတို arousal ၏စင်ကြယ်သောလုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။
ထိုသူတို့အဘို့ကသိသိသာသာပိုပြီးနွေးထွေးမှုနဲ့ဆက်စပ်နေသည်နှင့်နက်ရှိုင်းသောနွေးထွေးမှုတစ်ခုလုပ်ရပ်အတွက်မိတ်ဖက်နဲ့ဆက်ဆံရေး၌ဝေဖန်ရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့သောမကြာခဏ Self-စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိမ်လည်မှု၏ခံစားချက်အားဖြည့်ထားတဲ့ညစ်ညမ်းအဖြစ်ကိစ္စများလည်းရှိပါသည်။
နှင့်မိတ်ဖက်များအကြားဆက်သွယ်ရေးအတွက် - အဖြစ်ကိုမကြာခဏအလယ်ဗဟိုတွင်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်ဆက်ဆံရေးအတွက်တွေ့ကြုံတတ်၏။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပုံမှန်နှင့်များစွာသောလူတို့အဘို့သင်၏အသက်တာ၏ရုံပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တမ်းများအရ, စုံတွဲများလိင်အများကြီးမအကွံနှငျ့အတူ "မိမိကိုမိမိအပေါ်မှာလက်ကို တင်. ဖို့" လမ်းတစ်လျှောက်မကြာခဏရှိသည်။
အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ပြီးသား, အထက်ဖော်ပြထားသောကွဲပြားခြားနားလျက်, မိတ်ဖက်သို့မဟုတ်လိင်ဘဝနှင့်အတူမကျေနပ်မှုတွေနဲ့များသောအားဖြင့်ဘာမှရှိနေကြသည်။ ဒါဟာသင်ဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့စကားပြောနှင့်လျင်မြန်စွာထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမဆိုမရေရာဖယ်ရှားသာအရေးကြီးပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် masturbate သူတွေကိုပိုကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုရှိသည်ကြောင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါဘူး။ ဒါဟာဘုံလိင်အကျိုးနှင့်ပင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။ ဒီဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နှင့်အတူစကားပြောမယ့်သူကားအဘယ်သူ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းစေနိုင်သည်။
အဆိုပါပူးပေါင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ "ပေါ်တွင်5အတှေး | လိင် "
24 ။ 2018 မှအောက်တိုဘာလ 08: 42 နာရီ
ရုံလိင်ကြုံတွေ့နေကြရသည်ဆိုပါကပြဿနာတစ်ခု masturbation, သင်သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မအလိုဆန္ဒရှိသည်။ သငျသညျထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ဤပြဿနာကိုမရနိုင်လျှင်, သင်အကူအညီရသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မိတ်ဖက်ဖြစ်မှုကိုအလွန်ဆင်းရဲခံရပါလိမ့်မယ်။ ပေးမယ့်မိတ်ဖက်အတွက်လိင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။ တဦးတည်းတဦးတည်းသူသညျမိမိကျေနပ်လို့အလုံအလောက်ကောင်းသောမိတ်ဖက်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်စရာမသငျ့သညျ။ ကသေးတရားစွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးချက် undbedingt သည့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူဖြစ်သင့်ပါ။
22 ။ 2018 မှသြဂုတ်လ 10: 43 နာရီ
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသငျသညျကိုခစျြသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူလိင်တူသောအခြားအချည်းနှီးဖြစ်၏။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့။ မည်သူမျှအမျက်ထွက်ဖြစ်ဖို့နဲ့အခြားလိုအပ်တဲ့ပါပဲ။ ထိုလူတို့အရှင်ကျန်းမာရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
21 ။ 2018 မှသြဂုတ်လ 23: 18 နာရီ
နေသမျှကာလပတ်လုံးလိင်အဆိုပါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှခံစားနေရပြီးမပြုလုပ်ပါကသူ့ကိုယ်သူကျေနပ်နိုင်ရန်အတွက်အပြည့်အဝဖြစ်ပါတယ်။ အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဤလောကသို့သူ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်ငုပ်ထွက်နထေိုငျနိုငျသညျ။ တကယ်နောက်တဖန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားကြရသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကျေနပ်ဖို့လည်းအလွန်ဖြေလျော့ပေးခြင်း, စိတ်ဖိစီးမှု-သက်သာရာဖြစ်ပါသည်
21 ။ 2018 မှသြဂုတ်လ 14: 07 နာရီ
သငျသညျ masturbating မိတ်ဖက်ဖြစ်မှုကိုသွားလျှင်သေချာပေါက်သည့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင် fit မပါဘူးဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင်နှင့်လည်းမိမိကိုမိမိနှင့်အတူလိင်ရှိသင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရုံမျှမရှိနှင့်သင်လုပ်နေတာနဲ့တူခံစားမိလျှင်။ အဘယ်ကြောင့်မခံသနည်း သင်တို့သည်လည်းရှိတစ်ဦး partner ၏အပြစ်ရှိကြောင်းခံစားရမလိုပေ။ သငျသညျသူ့ကိုလှည့်ဖြားကြဘူးလို့ပဲ။
20 ။ 2018 မှသြဂုတ်လ 10: 40 နာရီ
လူအတော်များများဟာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမကောင်းတဲ့ကြောင်းထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုအခြားသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုသိသလော ဘယ်လိုသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်သင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိသောသူ, သင်ကြိုက်နှစ်သက်အရာကိုသိပါသလဲ? တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကျနော်တို့မကြိုက်ဘူးအဘယ်အရာကိုထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ ထိုမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်လည်းကောင်းဖြစ်နိုင်ပါ။